कसरी एक सुरक्षित र उच्च गुणस्तरीय आईपीएल कपाल हटाउने मेसिन?
कसरी सुरक्षित र उच्च गुणवत्ता आईपीएल कपाल हटाउने मेसिन प्राप्त गर्ने?
समय: 2019-11-06 हिट्स: 5
आईपीएल भनेको के हो?
आईपीएल - वा तीव्र पल्स लाइट मेशिनहरु - प्रकाश को दाल कि उत्सर्जन को रूप मा यो छाला को माध्यम बाट जान्छ गर्मी को लागी उत्सर्जन गर्दछ। गर्मी तपाइँको कपाल मा वर्णक वा मेलेनिन द्वारा अवशोषित हुन्छ र कूप हानि, बाधा वृद्धि।
आईपीएल र लेजर कपाल हटाउने बीच के फरक छ?
आईपीएल एक व्यापक स्पेक्ट्रम को उपयोग गर्दछ, जबकि लेजर मात्र एक एकल तरंगदैर्ध्य को उपयोग गर्दछ कि अधिक स्थायी छ तर अधिक पीडादायी हुन्छ।
के IPL वास्तव मा काम गर्दछ र यो पैसा लायक छ?
आईपीएल र लेजर टाढा लामो समय सम्म कपाल हटाउने को लागी सबैभन्दा प्रभावी तरीका हो र तपाइँको साप्ताहिक दाढी को तुलना मा एक धेरै स्थायी समाधान (धेरै कम प्रयास संग) को प्रस्ताव छ।
अब यो एक सैलून लेजर कपाल हटाउने मा सत्र प्रति पाउन्ड को सयौं खर्च गर्न को लागी आवश्यक छ, घर आईपीएल मेशिनहरु अधिक उन्नत, सुलभ र मात्र एक एक बन्द मूल्य ट्याग भएको छ।
यन्त्रहरु बर्षहरु मा एक लामो बाटो मा आउनुभएको छ र अब छिटो, सजिलो र एक क्लिनिक को लागी भन्दा सस्ता छन् र तपाइँको आफ्नै घर को गोपनीयता बाट यसको सफलता प्रतिद्वंद्वी गर्न सक्नुहुन्छ।
के आईपीएल पीडादायी छ?
यी यन्त्रहरु डराउनु पर्दैन। सनसनी एक तातो, छिटो चुटकी जस्तै छ - यो एक थोरै गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ तर केहि मिनेट पछि धेरै जसो मानिसहरु लाई थाहा छ कि उनीहरु कुनै पनि असुविधा को लागी अनुकूलन गर्न सक्छन्।
म कती पटक आईपीएल को उपयोग गर्नु पर्छ?
कुञ्जी स्थिरता हो: धेरै जसो तपाइँ मेसिनको आधारमा एक देखि तीन महिना सम्म कहीं पनी उपकरण साप्ताहिक प्रयोग गर्न को लागी आवश्यक छ, र एक पटक एक हप्ता पछि।
जब कपाल फिर्ता पातलो र अधिक छिटो बढ्छ, तपाइँ मात्र प्रत्येक six महिना मा टच-अप को आवश्यकता पर्दछ वा तेसैले यदि कुनै regrowth छ।
यस तथ्य को कारणले कि यी मेशिनहरु कपाल को रंग र तपाइँको छाला टोन को बीच एक उच्च भेद को आवश्यकता छ, उनीहरु उचित छाला र कालो कपाल को लागी सबै भन्दा राम्रो काम गर्दछन्। तलका धेरै मेशिनहरु गोरा, खैरो, सेतो वा रातो कपाल वा गाढा छाला टोन मा प्रयोग गर्नु हुदैन।
हाम्रो कम्पनी, शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माता, अनुसन्धान र आईपीएल depilation उपकरण को दस बर्ष भन्दा बढी को लागी विकास मा विशेष गरीएको छ। त्यहाँ धेरै राम्रो गुणस्तर संग लोकप्रिय उत्पादनहरु को एक श्रृंखला हो। म पक्का छु कि तपाइँ यो धेरै मनपराउनुहुनेछ!
आईपीएल कपाल हटाउने थेरापी को बारे मा अधिक जान्न को लागी, कृपया हामीलाई तुरुन्तै नवीनतम जानकारी को लागी सम्पर्क गर्नुहोस्।
अघिल्लो: तपाईं बिपी सैलुनमा नगरीकन आफ्नो आईपल लिन सक्नुहुन्छ।
अर्को: कपाल हटाउन उत्तम तरिका - आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण